चुनावी कार्यालयमा बम विष्फोट, उम्मेद्वारको गाडीमै भेटियो बम - Marganugami Daily
Marganugami Daily Main News चुनावी कार्यालयमा बम विष्फोट, उम्मेद्वारको गाडीमै भेटियो बम
चुनावी कार्यालयमा बम विष्फोट, उम्मेद्वारको गाडीमै भेटियो बम
सिरहा, ८ मंसिर । सिरहाको मिर्चैयास्थित बाम गठवन्धनको चुनावी कार्यालयमा बम बिस्फोट भएको छ । मिर्चैया नगरपालिका ६ मा रहेको नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एमाले (बामगठबन्धन) को चुनावी प्रचारप्रसार कार्यालयमा बम बिस्फोट भएको हो ।
सिरहा क्षेत्र नं. ४ को चुनाबी प्रचारप्रसारको कार्यालयमा आज (शुक्रबार) बेलुकी करीब ४ बजे कुकर बम बिस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । बिस्फोटबाट कुनै मानविय क्षति नभएको प्रहरीको भनाई रहेको छ । बिस्फोटले गर्दा कार्यालयको भित्तामा समान्य क्षति पुगेको सिरहा जिल्ला प्रहरी प्रमुख शेखर कोइरालाले जनाएको छ ।
घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई रहेको छ । प्रहरीले त्रसित गर्नका लागि बम बिस्फोट गराए हुन सक्ने जनाएको छ ।
स्थानिय प्रदिप साहको घरको माथिल्लो तल्लामा रहेको चुनाबी कार्यालयमा बम बिस्फोट भएको थियो । घटनास्थलमा जनतान्त्रिक तराईमुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) का पम्पलेट फेला परेको थियो ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा नहुँदा बम बिस्फोट भएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । चुनावको पुर्ब संध्यामा प्रहरी कार्यालय अगाडी नै बम बिस्फोट भएकोले चुनौति बढे्को छ । एक्कासी ठूलो आवाजमा बम विस्फोट हुँदा स्थानियहरु त्रसित भएका थिए ।
त्यसैगरी, सिरहा क्षेत्र नं. २ को चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा रहेको संघिय फोरम उम्मेद्वार सत्रुधनप्रसाद सिंह कोइरी चढेको गाढीमा बम फेला परेको छ । चुनावी प्रचारको क्रममा धनगढीमाई नपा ७ मा पुगेर गाडी राखी घरदैलोमा गएको वेला अज्ञान व्यक्तिले बम राखेको कोइरीले बताएको छ ।
गाडी बाटोमै राखेर घरदैलो गएको बेला कसैले बम राखेको हुन सक्ने उनले बताएको छ । उनका अनुसार घरदैलोमा रहेको वेला पर्चा सकिएर आफ्नो कार्यकर्ता गाडीमा पर्चा लिन जाँदा झोलामा शंकास्पद वस्तु भेटीएको जनाएको छ । त्यसमा पनि झोलाबाट बाहिर विद्युतिय तार निस्केकाले बम भएको आशंका गरिएको हो ।
प्रहरीले फूलकाकट्टीमा शकास्पद बस्तु फेला परेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख शेखर कोइरालाले झोलामा शंकास्पद वस्तु देखिएको बताए ।
हामीले झोलामा के हो भन्ने बुझ्न डस्फोजल टोली नगएसम्म यसै भन्न नसकिने एसपी कोइालाले बताए । नहेरेसम्म केही भन्न नसकिन्न त्यसको लागि सेनासँग सम्पर्क भईसकेकाले त्यहाँ सेनाको डिस्पोजल टोली पुगेपछि सत्य तथ्य खुल्ने जनाए ।